International Certified Professional တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီလား?
သင်နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု International Certified Professional တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီလား?
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး Online Test Center ဖြစ်သော GlobalNet IBT Test Center တွင် နိုင်ငံတကာ စာစစ်အဖွဲ့အစည်း Pearson VUE မှ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု Authorized Certifications များကို ဖြေဆိုရယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ Computer IT Skills, Management Skills, Medical Skills များကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီကြောင်းပြသနိုင်ခြင်း ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်ကြောင်း သေချာခြင်း၊ မိမိလုပ်ငန်းခွင်တွင် ပိုမိုအောင်မြင်နိုင်ခြင်းတို့ အတွက် မဖြစ်မနေ ရယူထားသင့်တဲ့ Professional Certification များ ဖြစ်တာကြောင့် မိမိရယူမည့်လက်မှတ််အတွက် လိုအပ်သည့် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုချင်သူများ GlobalNet Test Center နှင့် ခုဘဲ ဆက်သွယ် ဖြေဆိုလိုက်ပါ …
မိမိတို့ IBT – Internet Based Online Test Center တွင် _
ပြည်ပ Universities များသို့ တက်ရောက်ရန်ပြင်ဆင်နေသူများ၊ ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းပညာများနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာများကို ကမ္ဘာအဆင့်မှီ လေ့လာနေသူများအတွက် မဖြစ်မနေ ရယူထားရမည့် လက်မှတ်များကို တစုတစည်းတည်းဖြေဆိုနိုင်ခြင်း
မိမိ Career Development အတွက် အသင့်တော်ဆုံး Certification Trend များကို ဆွေးနွေးဖြေဆိုနိုင်ခြင်း
ဖြေဆိုပြီးသည်နှင့် Test Result ကို ချက်ချင်းသိနိုင်ပြီး၊ Score Report များ ထုတ်ပေးခြင်း
Walk-in Registration, Exam Reservation နှင့်ဖြေဆိုမှုအဆင့်အဆင့်မှ Certificate ရသည်အထိ (Certification Support) စသည့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများ ရယူနိုင်ခြင်းတို့အတွက် …
သင့်ရဲ့ Trusted Vocational and Education Services Provider – GlobalNet နှင့် ခုဘဲ ဆက်သွယ် စုံစမ်းလိုက်ပါ
Building 7, Room 3, MICT Park, Hlaing Universities Campus, Hlaing Township, Yangon, Myanmar.